တရုတ်မျက်မှန်များတပ်ဆင်ထားသောမျက်မှန်များ - အကာအကွယ်မျက်မှန် - မြူဆန့်သောမျက်မှန်များပစ်ခြင်းမျက်မှန်များကိုကြည်လင်သောအမြင်အာရုံ၊ ခြစ်ခြင်းနှင့်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ခံနိုင်သည့်မျက်မှန်ကာကွယ်ခြင်းမျက်မှန်ကာကွယ်ခြင်းမျက်မှန်တပ်ဆင်ခြင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးများထုတ်လုပ်သောစက်ရုံအလုပ်ရုံအတွက်ဆေးညွန်းသည့်မျက်မှန်များတပ်ဆင်ခြင်း | Baolai
အန္တရာယ်ကင်းသောမျက်မှန်များမျက်မှန်တပ်ကာမျက်မှန်တပ်ဆင်ခြင်း - အကာအကွယ်မျက်မှန် - မြူဆန့်သောမျက်မှန်များသေနတ်ပစ်ခြင်းမျက်မှန်များကိုကြည်လင်သောအမြင်အာရုံ၊ ခြစ်ခြင်းနှင့်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းဖြင့်ကာကွယ်ခြင်းမျက်မှန်တပ်ဆင်ခြင်းအမျိုးသားများအတွက်အမျိုးသမီးများအတွက်ဆေးညွန်းသည့်မျက်မှန်များတပ်ဆင်ထားသည်။
ANSI Z87.1 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် CSA Z94.3 သက်ရောက်မှုစံချိန်စံညွှန်းများအရ polycarbonate မှန်ဘီလူးဖြင့်ပြုလုပ်သော ၁. လုံခြုံစိတ်ချရသောကာမျက်မှန်များသည်ဆေးညွန်းသည့်မျက်မှန်အများစုနှင့်ကိုက်ညီသည်။
3.HD Anti-Fog / Scratch မျက်မှန်မှန်ဘီလူးသည် myopia, hyperopia နှင့်အတွင်းနေကာမျက်မှန်များကို ၀ တ်ဆင်ထားသည့်တိုင်မည်သည့်အချိန်၊
နေ့စဉ်သွားလာမှုလုံခြုံမှုအတွက်မျက်လုံးကာကွယ်ခြင်း၊ သစ်သားလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ဓာတုဗေဒသို့မဟုတ်သိပ္ပံဓာတ်ခွဲခန်းအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့်သွားပြုပြင်သည့်မျက်မှန်တပ်ရန်လိုအပ်သည်၊ ဖုန်မှုန့်နှင့်အရည်အမှုန်များ၏မျက်စိအတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းနှင့်ပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
ခြစ်ရာများကိုရှောင်ရှားရန်၊ over specs များကို ၀ တ်ဆင်သည့်အခါမျက်မှန်နှစ်ဖက်လုံးအကြားလုံလောက်သောကွာဟမှုကိုအမြဲထားရှိပါ။
Item NO ။ 2301
အရွယ်အစား 155x54 x ကို 49mm
အထုပ် 10 pc အတွင်းပိုင်းသေတ္တာ / 300 PCs / ပုံး
အထူ ၂.၀ မီလီမီတာ
ပုံး၏အရွယ်အစား 79x 28 x ကို 50 စင်တီမီတာ
လက်မှတ် အီး - FDAEN166
သင့်မျက်စိအားအပျက်အစီးများမှကာကွယ်ရန် ၁.၁၀၀% အသစ်စက်စက်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
2. ထိရောက်စွာကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး၊ ဖုန်မှုန့်တိုက်ဖျက်ရေး၊ ဆေးမင်ကြောင်ထိုးခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးကိုထိရောက်စွာကာကွယ်ပေးသည်။
ဝတ်ဆင်ရန် 3.Comfortable ။
အလုပ်၊ သင်ယူခြင်း၊ ဘဝ၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောခြင်း၊
အဓိကအကြောင်းအရာ: Drool ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး， ဖုန်မှုန့်တိုက်ဖျက်ရေး，dမျက်ရည်စက်လေးတွေနှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။
ထုပ်ပိုး: OPP အိတ်
မျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး 1 တရံ
Cathery Anti-Viru Safety မျက်မှန်များတပ်ဆင်ထားသည့် Soft Clear PC Antivirus Fog Spray ဆေးရုံ
နောက်တစ်ခု: Safety Goggles၊ အကာအကွယ်ပေးသည့်မျက်မှန်များ၊ Soft Crystal Clear Eye Protection - ဆောက်လုပ်ရေး၊ သေနတ်ပစ်၊
Square ကြီးကြပ်နေသည့်နေကာမျက်မှန် 100% ခရမ်းလွန်ကာကွယ်မှု ...
Anti-Fog Face Protection ပေါ့ပါးသော Transparen ...
ဘေးကင်းလုံခြုံရေးမျက်မှန်များ Adjustable Wide-Vision Protectiv ...